Moments Neshamwari 32
Zvinokwanisika here kuisa pfungwa kunze kwepfungwa? Kana zvirizvo, zvinoitwa sei; munhu anogona sei kudzivirira kudzokorora kwayo uye kuichengeta kunze kwepfungwa?
Izvo zvinoita kuti uchengetedze pfungwa kunze kwepfungwa, asi hazvigoneke kuisa pfungwa kunze kwepfungwa sezvo isu taizoisa chidhina kubuda mumba. Chikonzero nei vazhinji vasingakwanisi kuchengeta pfungwa dzisina kufanira, uye vasingakwanise kufunga pamitsetse yakajeka, imhaka yekuti ivo vanotenda mukufunga kwakapararira kuti ivo vanofanirwa kubvisa pfungwa kunze kwepfungwa dzavo. Hazvibviri kuisa pfungwa kunze kwepfungwa dzemunhu nekuti mukuchiisa kutarisa kunofanirwa kupihwa iyo pfungwa, uye nepo pfungwa ichipa pfungwa kutarisisa hazvibviri kubvisa iyo pfungwa. Iye uyo anoti: Enda iwe iwe wakafunga zvakaipa, kana, ini handifunge nezve izvi kana izvo, anochengeta chinhu icho mupfungwa yake zvakachengeteka sekunge chakakwenudzwa ipapo. Kana mumwe akataura mukati make kuti haafanire kufunga nezveichi kana chinhu icho, achaita seane ascetics uye hermits uye vanopenda vanogadzira runyorwa rwezvinhu zvavasingazofunge nezvazvo vobva vaenderera nekuenda pamusoro peiyi chinyorwa mupfungwa uye kuisa pfungwa idzodzo dzakabuda mupfungwa dzadzo dzikatadza. Nyaya yekare ye "Great Green Bear" inoratidza izvi chaizvo. A mediaeval alchemist akashatiswa nemumwe wevadzidzi vake aida kuudzwa nzira yekumisa lead negoridhe. Tenzi wake akaudza mudzidzi kuti aisakwanisa kuzviita, kunyangwe akaudzwa, nekuti aive asina kukodzera. Achienderera mberi achiteterera mudzidzi, alchemist akafunga kudzidzisa mwana chidzidzo uye ndokumuudza kuti sezvaaive ari munzira rwendo zuva raitevera achazomusiira formula yaaizobudirira nayo kana achikwanisa kutevera mirairo yese , asi kuti zvave zvakafanira kubhadhara zvakanyanya kuvhara kune formula uye kuve wakarurama mune zvese zvakadzama. Mudzidzi akafadzwa uye nechido akatanga basa panguva yakatarwa. Akatevedzera zvakanyatsonaka uye aive akajeka mukugadzirira kwezvinhu zvake uye zviridzwa. Akaona kuti simbi dzemhando chaiyo uye huwandu hwaive muzvipiyaniso zvavo, uye tembiricha yaidikanwa yakagadzirwa. Aive akangwarira kuti iwo maforamu akange ese akachengetedzwa uye akapfuura kuburikidza neanemics uye maresorts, ndokuona kuti amana kubva kune aya aive chaizvo sezvakange zvataurwa mufomati. Zvese izvi zvakamuunzira kugutsikana kukuru uye sezvaakaenderera mberi nekuedza kwaakawana kuvimba mukubudirira kwazvo. Mumwe wemitemo waive wekuti aisafanira kuverenga kuburikidza formula asi aifanira kuitevera chete sezvo iye achienderera nebasa rake. Paakaramba akadaro, akataura mashoko ekuti: Zvino zvayedza zvasvika pari zvino uye kuti simbi iri kupisa chena, tora hupfu hushoma pakati pewamberi uye pachigunwe che ruoko rwerudyi, zvishoma nechena pakati pewamberi uye chigunwe cheruoko rworuboshwe, mira pamusoro pekupenya uko iwe ikozvino pamberi pako uye gadzirira kudonhedza awa powders mushure mekunge wateerera inotevera kurongeka. Jaya rakaita sekurairwa uye rakaverengerwa: Wasvika ikozvino muedzo wakakosha, uye budiriro inotevera chete kana uchikwanisa kuteerera zvinotevera: Usafunge nezvegirini huru bhuru uye uve nechokwadi chekuti haufungi nezve bhuru rakakura rakasvibira. Jaya rakambomira risina mweya. “Hombe huru yegirini. Handifunge nezve fani huru yegirini, ”akadaro. “Hombe huru yegirini! Chii chakakura bhuru rakasvibira? ndiri, Achifunga nezve bhuru rakakura rakasvibira. "Paakaramba achifunga kuti haafanire kufunga nezvegirini nyowani iyi yaaisakwanisa kufunga nezve chimwe chinhu, kusvika pakupedzisira zvakazoitika kwaari kuti aenderere mberi nekuedza kwake uye kunyangwe kufunga kwechimwe chinhu. hombe yegirini yakakura ichiri mupfungwa dzake akatendeukira kumafomati kuti awone kuti akateedzerei uye iye akaverenga: Wakundikana mukuyedzwa. Iwe wakundikana panguva yakakosha nekuti watendera kuti pfungwa dzako dzitorerwe kubva kubasa kufunga nezve bhuru rakakura girini. Iko kupisa mukati mevira hakuna kuchengetwa kumusoro, iyo chaiyo yakakodzera yefa yakundikana kupfuura ichi uye ichocho chinodzoreredza, uye hazvibatsiri ikozvino kudonhedza tsvuku uye chena poda.
Pfungwa inoramba iri mundangariro sekureba sekutarisirwa kunopihwa kwazviri. Kana pfungwa dzikamira kupa pfungwa kune imwe pfungwa voisa pane imwe pfungwa, pfungwa iyo ine hanya inoramba iri mundangariro, uye iyo isina hanya inobuda. Nzira yekubvisa iyo pfungwa ndeye kubata pfungwa zvechokwadi uye nekuenderera mberi pane imwechete yakatsanangurwa uye yakatarwa nyaya kana pfungwa. Zvinozoonekwa kuti kana izvi zvaitwa, hapana pfungwa dzisiri dzakanangana nechidzidzo dzinogona kuzvibaya mupfungwa. Nepo pfungwa ichishuva chinhu icho pfungwa chayo chinotenderera chakatenderedza chinhu ichocho chechido nekuti chishuvo chakaita sedivi rekukoka uye unokwevera pfungwa. Pfungwa inogona kuzvisunungura pachako kubva kuchishuvo, kana ichida. Maitiro ayo akasunungurwa kuti anoona uye anonzwisisa kuti chishuwo hachisi chakanakira icho uye obva afunga pane chinhu chiri nani. Mushure mekunge pfungwa yasarudza pamusoro pechakanakisa chinyorwa, chinofanira kutungamira kufunga kwayo kune icho chinyorwa uye kutarisirwa kunofanira kupihwa kuch icho icho choga. Neichi chiitiko, nzvimbo yekukoka inoshandurwa kubva kuchido chekare kuenda kuchinhu chitsva chefungwa. Pfungwa dzinosarudza kuti pakati payo panokweva giraundi kupi. Kune chero chinhu kana chinhu chinoenda pfungwa ichaenda ipapo ichafunga. Saka pfungwa dzinoramba dzichichinja chinyorwa chayo chekufunga, pakati payo, kusvika pakudzidza kuisa pakati penzvimbo yemweya. Kana izvi zvaitwa, pfungwa dzinozvibvisa mukati maro zvadzinogadziriswa uye zvinoshanda, kuburikidza nenzira dzemaonero uye nhengo dzepfungwa. Pfungwa, isiri kushanda kuburikidza nemanzwiro ayo kupinda mune inoonekwa nyika, uye kudzidza kushandura masimba ayo mukati mairi, pakupedzisira inomutsa kune yayo chaiyo seyakajeka kubva kune yayo yenyama uye yemimwe miviri. Nekuita izvi, pfungwa hadzingotarise hunhu hwayo chaihwo asi inogona kuwana hunhu hwechokwadi hwevamwe vese uye hwenyika chairo inopinda uye inosimudzira vamwe vese.
Kuziva kwakadaro hakugone kuwanikwa panguva imwechete, asi kunozoonekwa semhedzisiro yekuchengeta pfungwa dzisina kunaka kunze kwepfungwa nekuteerera uye kufunga kwevamwe izvo zvinodikanwa. Hakuna munhu panguva imwechete anokwanisa kufunga chete nezvepfungwa iyo yaanoda kufunga nezvayo uye nokudaro kurega kana kudzivirira dzimwe pfungwa kubva pakupinda pfungwa; asi anozogona kuzviita kana akaedza uye akaramba achiedza.